Alshabaab la ogaa oo xil loo dhiibay | allsanaag
Alshabaab la ogaa oo xil loo dhiibay
Sarkaal ka mid ahaa Sfaaradda Soomaalida ee Turkiga, markii danbe noqday Taliye ku xigeen, lana soo shaqeeyey gudoomiyha baarlmaanka oo aan horay maqaalo badan uga soo qornay inuu ka mid yahay argagixisada ayaa maxkamad lagu soo saarayaa denbiyo uu gaystay. Taliyahan ayaan xilka dawladda federaalka intaan loo magcaabin ka tirsanaa Ururka dadqalatooyinka ee alshabaab, isaga oo lagu magcaabi jiray Abu jihaad
Taliye ku xigeenkii NISA Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo dhawaan shaqo joojin lagu sameeyay in uu ku jiro saraakiil lagu eedeeyay fududeynta weeraro kooxda al shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho, Gaar ahaana wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo koontaroolka Ceel-Gaab oo laga ilaaliyo Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Xog aan helnay ayaan ku ogaatay in galdacwadeed kiiskaasi la xiriira loo gudbiyay Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sidda Ee Soomaaliya oo Su’aalo Lagu Weydiinayo G/Sare Cabdulqaadir Maxamed Nuur, iyadoo sidoo kale baartiaanada Kiiskaan ay ka qeybqaadaneyso hay’adda dambibaarista ciidamada Booliska Soomaaliyeed ee CID.
Gaashaanle Sare Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa lagu eedeeyey in Amarkiisa lagu soo daayay Maleeshiyadkii hubeysnaa ee Al Shabaab ee weerartay 07 July weeraray dhismaha Oto Oto oo ay ku shaqeeyaan wasaaradaha Amniga iyo Arrimaha Gudaha, kuwaas oo watay laba gaari oo qaraxyo ku raranyihiin, sida ay sheegeen saraakiisha loo xirxiray arrintaas oo wali baaritaankoodu socdo.
Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka Xuseen Cusmaan Xuseen shaqada ka joojiyay G/Sare Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ahaa taliye ku xigeenka Hay’adda NISA, waxaana hadda socoto baaris kiiskaasi la xiriirto.
Sidoo kale Jaamac ayaa lagu eedeeyey dacwad laga gudbiyey inuu fududeeyay weeraro iyo dilal kala duwan oo lagu dilay odayaal dhaqameedyo iyo dhallinyaro u shaqeynjiray dowladda Soomaaliya, iyadoo mudadii 6 bil ee uu ahaa ku simaha Taliyaha NISA uu sheegay in magaalada Muqdisho uusan ka dhicin hal Qarax taasoo dadka arrimaha Ammaanka Falaanqeeya su’aalo badan ay iska weydiinayeen.
Dowladda Soomaaliya ayaa diyaarineyso qaabkii maxkamad loo soo tagi Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo saraakiisha kale ee lagu eedeeyey inuu ka qeybqaadatay fududeynta weerarada Argagixiso ee maalin kasta lagu laayo maatida Soomaaliyeed sida lagu qoray dacawadda laga gudbiyey.
← Hooyadiin u sheega Hambalyo dugsiga Alnajax →